यस्तो मन्दिर जहाँ मनले चाहेको पूरा हुनेगर्छ बिश्वास नलागे दर्शन गरि एक सेयर गर्नुहोस - Nepal Insider
Home/रोचक/यस्तो मन्दिर जहाँ मनले चाहेको पूरा हुनेगर्छ बिश्वास नलागे दर्शन गरि एक सेयर गर्नुहोस
यस्तो मन्दिर जहाँ मनले चाहेको पूरा हुनेगर्छ बिश्वास नलागे दर्शन गरि एक सेयर गर्नुहोस
डिल्लीबजार र ज्ञानेश्वरका बीचमा अवस्थित मैतीदेवी मन्दिरमा नेवार समुदायका वज्राचार्यहरुले पुस्तौँदेखि पूजा गर्दै आएका छन् । उनीहरु मन्दिरको रेखदेखकर्ता र संरक्षकका साथै पुजारीका रुपमा चिनिन्छन् ।मन्दिरको स्थापना विसं ६८५ वर्षमा अंशु वर्माको शासनकालमा भएको मानिन्छ । वर्षौंदेखि मन्दिरमा बिहान तथा साँझ पूजा एवम् भजनकीर्तन हुँदै आएको छ ।
कुन उमेर मा चम्किन्छ तपाईको भाग्य ? राशीअनुसार यसरी पत्ता लगाउनुहोस !
आज तीजको व्रतमा कसरी नुहाउने स् कसरी ब्रत बस्ने ?